तपाईले यो चुपचाप पढ्नु पर्छ जीवनमा एउटा साँचो पाठ हो: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	7 मार्च 2019 मा	•7टिप्पणिहरु
आज हामी राजनीतिको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं: लोकतान्त्रिक। यो समय हो कि मान्छे हेर्न को लागी कि लोकतान्त्रिक अवस्थित छैन। यो टाढा छ राम्रो प्रशिक्षित अभिनेताहरूको एक शम; माछा र मास्क एउटै अनुहारमा मात्र राख्छ जुन केवल लोकतान्त्रिक रूपको रूपमा राख्छ। पश्चिमी देशले द्वितीय विश्व युद्ध पछि के गर्छ? दोस्रो संसार युद्ध पछि यूरोपमा के भयो? हामी 'dictatorator' छोड्छौं जब हामी गर्छौं र सम्पूर्ण जनजातिहरू हाम्रो ड्रोनमा डुब्न सक्दछौं? हामी लोकतान्त्रिक स्थापना गर्दछौँ। हामी स्वयं द्वारा चयन गरिएका पंजेहरूसँग गर्छौं, जसलाई जनसंख्यालाई मतदान गर्न अनुमति दिइएको छ, ताकि तिनीहरू एक निर्वाचित सरकार हो। स्वादहरू छनौट गर्न सकिन्छ जुन हामी सबैद्वारा डेलिभरी हुन्छ। के तपाईंलाई केहि उदाहरण दिनुपर्छ? युगोस्लाभिया, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, यूक्रेन र त्यसोभए सम्भवतः? युरोप आफैले राम्रो उदाहरण हो। द्वितीय विश्व युद्ध पछि, सरकारहरू स्थापित भएका थिए जुन अमेरिकाको पनी केही थिएनन्। हामी अमेरिकी को ट्युन गर्न दशकसम्म danced र ईयू सधैं काठी मा हिटलर मदत गर्ने नाजीहरूले जस्तै नै ठूलो साम्राज्य बनाउन योजना बनाएका थिए राजकुमार Bernhard गरेको Bilderberg समूह मात्र कली छ: इिन वोल्क, ईिन रीच, ईिन फुफर.
यस्तै प्रिन्स बर्नहेर्डले नाजी समूहको लागि जासूसको रूपमा काम गरे। KLM र लाल क्रस दक्षिण अमेरिका तिर सबै ती नाजी नेता जस्तै शक्ति क्षेत्र बाट एडल्फ हिटलर पछि फाइन्यान्सरों ओसारपसार र हिटलर financed गर्नेहरूलाई। युरोपेली स्थानीय लोकतान्त्रिकहरूलाई उनीहरूको लागि मतदान गर्ने (इमानदार लोकतान्त्रिक) को लागी एकदमै शक्तिको पंजा र पछि लागेका दशकहरूमा, यो परिवर्तन भएको छैन। यो यति धेरै उपयोगी छ इतिहासको यो अंश तपाईले पढ्नु अघि राम्रो अध्ययन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठले लोकतान्त्रिक जड़हरू हेर्नको लागी सुरू गर्छ जस्तो लाग्छ जसलाई हामी थाहा छौँ।
मैले यो विषयलाई फेरि सम्बोधन गर्न किन ट्रिगर गरियो? मलाई यो ट्रिगर गरिएको थियो, किनकि हालैमा तपाईले सबै प्रकारको सन्देशहरू सोशल मिडियामा गुजरिरहेका देख्नुहुन्छ जुन बायाँ र दायाँ क्षेत्रमा हलचल देखिन्छ। हामी हो, जस्तै थिए, आगामी चुनावमा पार्टी ए, बी वा सी मतदान गर्न फोकसमा राखियो। निम्न पोष्ट आज बिहान आइपुग्नुभयो र दाहिने क्षेत्रबाट आउछ र त्यसकारण सम्भवतः मतदानकर्ताहरूलाई दायाँ तिर धकेल्नु पर्छ। हामी मतदान बक्समा फर्किनु अघि, यो प्रणालीमा जड को राम्रो दृश्य राम्रो लाग्न सक्छ। तपाईले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ, तर के भने सबै प्रस्तावित पक्षहरू उही शक्ति कुकरबाट आउँछन् र मात्र समाजमा जानबूझ्दो ईन्धित तनाव खिच्ने उद्देश्य हो? के यो पनि हेर्न को लागी कि समय मात्र स्पष्ट विरोधाभास को Hegelian सिद्धान्त संग खेलाडी छ? सबै लोकतन्त्र साँच्चै अवस्थित कि गर्दैन र राजनीतिक क्षेत्रमा देख्ने pawns, थप केही नै अनुहार को मास्क भन्दा हुन् भनेर देखाएर अर्थात् सुरूमा, कोर संग सुरु; हेल्जियन बल क्षेत्र को मास्क। तिनीहरूले वास्तविक विरोध समाज लोकतन्त्र को भ्रम प्रतिबिम्बित गर्न जारी असफल छ र यो यति सुन्दर क्रममा मतभेद गुप्तमा शक्ति को इच्छित संश्लेषण हासिल गर्न भनेर देखाए गर्ने दार्शनिक Hegel, द्वारा प्रयोग गरिन्छ वर्णन सिस्टम प्ले जारी ।
मैले निम्न सन्देशलाई बिहानै बिहान देखेँ, तपाईंले पढ्नुभन्दा अघि पढ्नुहुन्छ:
तपाईले यो चुपचाप पढ्नुपर्छ
त्यहाँ जीवनमा साँचो पाठ छ ....
मैले एक पक्षी फिडर किन्।
मैले यसलाई मेरो पछाडिको बालकनीमा लियो र बीउ संग भरी।
कस्तो मायालु पक्षी फिड यो मैले बीजलाई मायालु रूपमा भरिएको थिएँ।
एक हप्तामा हामी सयौं चराहरू थियौ, मुक्त र सजिलै सुलभ खानाको विपरित प्रवाह को प्रयोग गर्दै।
तर त्यसोभए मेजले तालिकामा माथि र बार्बेक्यूको बगलमा बालकनीको भित्तामा घामहरू निर्माण गर्न थाले।
त्यसपछि पो आयो।
यो सबै ठाँउ हो: टाइल छत, कुर्सियों, टेबलेट, हरेक ठाँउ मा!
त्यसपछि केही चराहरू कष्टप्रद भए।
तिनीहरूले डाइभेस गरे र मलाई उठाए तापनि मैले आफ्नै जेबबाट भोग्नुपरेको थिएँ।
अन्य पक्षीहरू अचम्म र ठूलो थिए।
तिनीहरू बर्ड फीडरमा बसेर चिल्लाए र मलाई चिच्याए।
दिन को सबै घण्टा र पनि रातमा र तिनीहरूले माग गरे कि खाना खाएको थियो जब मलाई भरिएको थियो।
केहि समय पछि म घर पछि मेरो आफ्नै बालकनीमा बस्न सक्दिन।
त्यसोभए मैले चरा चिसो फीड लिनुभयो र तीन दिनमा चराहरू गायब भयो।
मैले उनीहरूको गहिरो सफा गरे र उनीहरूले बालकनीमा सबै ठाँउ बनाएका धेरै जनावरहरू हटाउँथे।
चाँडै, फिर्ता बालकनी पहिले जस्तै थियो।
शान्त, शान्त .... र एक अझै पनि नि: शुल्क भोजनको दाँयामा थिएन।
हाम्रो सरकारले निःशुल्क भोजन, सामाजिक आवास, नि: शुल्क मेडिकल हेरविचार र नि: शुल्क शिक्षा प्रदान गर्दछ र सबैलाई यहाँ डच स्वचालित रूपमा डाइरेक्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यसपछि अवैधहरू दशौं हजारहरूसँगै आए।
अचानक हाम्रो करहरू नि: शुल्क सेवाहरूको लागि चलाइयो; पसलहरू लुटिएका छन् र सतावटहरू अभियोजन गर्दैनन्; घरहरू धेरै सदस्यहरू सहितका लागि पूरा भान्सा सहित घरहरू;
तपाईं आपातकालीन डाक्टरको लागि घण्टाको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ; पुलिस अझै पनि आउन सक्दैन।
तपाईंको बच्चा समूह4बाट अन्य विद्यालयहरूसँग छ, किनभने आधा वर्ग भन्दा बढी डच बोल्दैन।
मेरो बैंकले मलाई डचमा बोल्ने सुन्नुको लागि '1 थिच्नुहोस्' थिच्नुहोस्।
यसबाहेक, मानिसहरू झण्डाहरूसँग लुगा लगाउँछन्, सडकमा हिंड्दै हिंड्छन् र थप अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गर्छन्।
सम्भवतः यो सरकारको लागि खाना ट्रे टाढाको समय हो।
यदि तपाईं यससँग सहमत हुनुहुन्छ भने, यो माध्यम ले,
... यदि होइन ...
बस पू सफाई जारी राख्नुहोस्।
हामी यहाँ देख्नुहुन्छ कि कसरी सही शक्तिको बायाँ भागमा बायाँ बजाउन सोशल मिडिया प्रयोग गरिन्छ प्रयोग गर्ने तरिकाको एक राम्रो उदाहरण, थरिरी Baudet वा Geert Wilders को जस्तै पार्टीहरूको लागि मतदान गर्न को लागी। यो गेट लगाउन ट्रिगर गर्न को लागी, किनकी मान्छे केहि केहि बिरामी छन्। ती मतदाताहरू सधैं बिर्सन्छन् कि यसले तपाइँलाई के लागि मतदान गर्नुपर्दैन। हाम्रो आँखाहरू कहिलेकाहीँ पूर्णतया पूरा भएका छैनन् संग हाम्रो बन्द गर्न प्राप्त गर्ने अनुभव छ? ब्रेक्सिट शायद सबै भन्दा राम्रो उदाहरण हो। मैले सुरुदेखि भविष्यवाणी गरे कि ब्रेक्सिट कहिल्यै सफल भएन (हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ)। यो प्राप्त गर्न मात्र एक चीज हो कि यस राजनीतिक आन्दोलन को प्रतिनिधित्व गर्ने अभिनेताले देखाउन सक्छ कि ईयू छोडेर आर्थिक आपदा हुन सक्छ। यो खेल राजनीतिक पछाडि धेरै वर्षहरु लाई मीडिया कवरेज मा र धेरै भन्दा अधिक मुस्कुराएको छ, तर यो तल्लो तह हो। यदि मतदान परिणामहरू दायाँबाट लाभ मा, यो किनभने यो एक मिशन संग एक वांछित लाभ हो। मिडिया र सोशल मिडियाले सबै ठूला डेटासँग संयोजन गर्न पावर ह्यान्डलहरूलाई उनीहरूलाई चाहने दिशामा हिँड्न ठूलो उपकरण दिन्छ। केवल इच्छित परिणाम युरोप तिर तिर बढ्ता पावर हो, भले यो अस्थायी रूपमा शक्ति चाहिन्छ। के तपाईंले नीदरल्याण्डमा भर्खरै केहि डेलिभर गरेको सन्दर्भमा छ? होइन, अवश्य होइन।
हेगले वर्णन गरे कि कसरी थीसिस र विरोधी-थीसिस संधै संश्लेषणको लागि नेतृत्व गर्दछ। यो सबै भन्दा सजिलै ब्याट्रीमा प्लसमा र खनिज पोलको रूपमा वर्णन गरिएको छ। तपाईंले दुइटा विरोधीहरू सिर्जना गर्नुहुँदा के हुन्छ? त्यसपछि तपाइँ सिधा वर्तमान उत्पन्न गर्ने आधार राख्नुभयो। र यसैले तिमी रोशनी छोड्छौ। समाजमा विपरीत ध्रुव जानबूझेर सिर्जना गरिएको हो जुन अन्ततः इच्छित दिशामा प्रवाह बुझ्न सकिन्छ। त्यो एक पुरानो नियम हो जुन दृश्य पछि वास्तविक शक्ति प्रयोग गर्दछ। यो वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रतीकले राजनीतिक बल क्षेत्रमा राम्रो प्रशिक्षित अभिनेताहरू मार्फत भरिएको छ। तिनीहरूले तपाईंलाई विलम्ब पोलहरूको स्वाद प्रदान गर्दछ, जसले यस प्रकारको इच्छित दिशामा सीधा वर्तमान प्रदान गर्दछ।
निस्सन्देह, हामी सबैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्न चाहन्छौं। त्यो काम गर्ने एकमात्र प्रणाली हो। दृश्य म पूर्णतया बुझ्न, तर हामी युरोप मा कि लोकतन्त्र, थप केही एक शर्मिंदगी लोकतन्त्र भन्दा निर्मित छ Hegelian सिद्धान्तमा आधारित हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामी पहिलो सफा पानामा संग आफ्नो जरा गर्न सामा उन्मूलन हुनुपर्छ कि बिन्दु सुरु गर्नुहोस्।
त्यसैले यदि तपाई आज बिहान फेसबुकबाट उठाएको माथिको 'दाहिने' दृष्टान्त पढ्नुहोस्, त्यसपछि निष्कर्ष हो: यो वर्तमान सरकार सम्म छ; सरकार। त्यसोभए त्यस पछि उनीहरूलाई शक्तिको नयाँ पंजाहरूमा मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। क्या यो पनि हेर्न को लागी कि तपाईं केहि पनि नहीं गर्छन तर हेगेलियन बल क्षेत्र को उनको नयाँ ध्रुवीकरण मा मजबूत गर्न को लागी? तपाइँ वास्तवमा नयाँ प्रस्तावित स्वादहरूको माध्यमबाट प्लस र माइनस पोलहरू भर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं एक व्यावहारिक प्रणालीमा जान चाहानुहुन्छ भने, तपाईलाई पहिले मतदान बक्समा जाँदैन। बायाँ र दायाँ को रूप मा भरने वाला अभिनेता - पंजे त्यहि प्रेत प्रजातन्त्र को एक मुखौटा भन्दा अधिक केहि नहीं हो, जो केवल समाज मा अलग अलग राय मा कब्जा गर्दछ। केहि परिवर्तन गर्न को लागी एकमात्र तरीका अब काम गर्ने छैन प्रणालीमा वैधता प्रदान गरेर। यदि यो वास्तविक लोकतान्त्रिक हो भने, तपाईंले केहि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। जबसम्म तपाइँले नियन्त्रणमा रहेका विरोध पंजाहरूमा मात्र मतदान गर्नुभयो भने तपाई आफैले मजाक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले माथिबाट अपेक्षा राखेर प्रणालीलाई राख्नुहुन्छ। आवाजहरूले बल क्षेत्रलाई वैधता दिन्छ जुन जान्छ कि हेगेलियन डायलिकिक प्लस र मिनिस पोलहरू जान्छ। कहिलेकाहीं मतदान बक्समा कहिल्यै दौडदैन र अब निष्क्रिय हुन प्रणालीबाट र यो माथिको अपेक्षा केवल एकमात्र सुरुवात हो। एक सख्त प्रणालीले मात्र पुनः सुरु गर्न सक्छ यदि यो पूर्णतया बिच्छेदन र जडित हुन्छ।
या तपाईं निम्न प्रकार को जोडेहरु महान युरोप को फ्यूजर बनने को लागि चाहते हो, किनकी तपाईं यस विचार को वैधता दिनुहुन्छ कि मतदान केहि गर्दछ? तपाईले गरेको काम भनेको Hegelian ब्याट्रीलाई फ्याँकिएको छ। दुर्भाग्यवश, तथापि, धेरै मानिसहरु आर्थिक तवरमा एकै प्रणालीमा निर्भर हुन्छन् र यो शायद सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यसैले पढ्नुहोस् यहाँ तपाईं कसरी क्रांति लिनुहुन्छ? आज मद्दत गर्न सक्छ। (साँच्चै पढ्नुहोस्!)
के तपाइँ यस लेखको कदर गर्नुहुन्छ? यसलाई साझा गर्नुहोस्, न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्नुहोस् र उदाहरणको लागि सामेल गरेर लेखकलाई समर्थन गर्नुहोस्। जारी राख्न तपाईको समर्थन आवश्यक छ।
थियरी बाउडेट जोडे हो जसले कसलाई गर्दनको बारेमा सोच्न सक्छ
ट्याग: केन्द्र, लोकतान्त्रिक, विशेष, FvD, tassel, लिंक, provincial, PVV, दायाँ, राज्य, मतदान गर्नुहोस्, चुनाव
7 मार्च 2019 मा 14: 10
आफ्नो आवाज खर्च गर्ने मान्छे, निष्क्रिय वा सक्रिय, consciously वा बेहोश अवस्थामा साना मानव सभ्यता अझै पनि पृथ्वीमा बाँकी विनाश मा complicit।
पश्चिमी देशहरूमा, जनसंचार त्यहाँ सिस्टम द्वारा उपचार को मान्छे पूर्ण फिट जो प्राविधिक disposables, निर्भर बनेको छ, मान्छे प्रणाली तिनीहरूले भने गर्न सक्छन् अब उत्पादक द्वारा हुन defecated गर्ने मानव संसाधन भएका छन्। मानिसहरू जान्दछन् कि उनीहरूले सुर्खेतमा हरेक पटक पतली छालको रूपमा अन्त्य गर्न सक्छन् र यसैले डरमा बस्न सक्छन्। हामीले कस्तो सुन्दर लोकतांत्रिक प्रणाली छौँ! यस डर-आधारित प्रणाली साँच्चिकै संसारभरि लागू गर्नैपर्छ, त्यसैले नयाँ विश्व अर्डर दिनको पासको साथ आउनेछ।
NAZI जर्मनीमा, युद्ध विनाश गर्नुअघि, यदि उनीहरूले प्रणालीमा भाग लिने भए पनि मान्छेलाई इनाम दिएका थिए। आखिर, के त्यहाँ आउन खतराको को आम चेतावनी दिए जो केही थिए त्यतिबेला पहिलो विश्व युद्ध को हानि ... पछि पुनर्निर्माण गर्न भएको थियो। तर भेडा पटक सजिलो अब शक्ति पर्दा पछाडि शक्तिहरू द्वारा राख्नु भएको थियो जो प्रसिद्ध जुङ्गा, संग गोठालो नेतृत्व गर्न थिए। हामी सबैको नतिजा थाहा पाउँछौं: एक विनाशकारी युद्ध जुन अहिले प्रशोधन गरिएको छैन।
अहिले हामी के काम गर्दैछौं, केहि व्यक्तिहरूको बाहेक?
7 मार्च 2019 मा 14: 53
सबै कुरा जाँच गरिएको छ .. विपक्षी पनि ..
7 मार्च 2019 मा 17: 04
सबै कुरा जाँच गरिएको छ, त्यसैले विपक्षी पनि। एक बस जस्तै झलक। हरेक यस फारस जस्तै काम गर्दछ वा यो बुझ्न धेरै बेवकूफ छ। तर हो, त्यो प्रकारका प्रकारहरू तिनीहरू बेवकूफ र डसेल चाहन्छन्। सबै सामान्य suspects नियन्त्रित छ, हरेक धर्म मा, सामाजिक ईन्जिनियरहरु सामान्य suspects सबै प्ले तिनीहरूले प्रत्येक अन्य संग वास्तविक भ्कगडा छन् बहाना र तिनीहरू शताब्दीयौंदेखि गरेका afgesproken.Dat आदि आदि छन्, जासुसहरूलाई रूपमा प्रत्येक पक्ष छन् शायद मिलनिया। म सामान्य शंकास्पदहरूको प्रशंसक होइन।
7 मार्च 2019 मा 21: 38
संयुक्त राज्य र जिब्राल्टर युरोपेली संघ सदस्यता referendum पछि असफल भने र शिविरमा सही सबै आलोचना लागि दोष गर्न सकिन्छ (र तिनीहरूले लागि हो जस्तो देखिन्छ - नियन्त्रित - विपत्ति ल्याएको छ), अधिक महत्वपूर्ण दायाँ कि समूह (तथाकथित षडयंत्र सिद्धान्तकारहरु) जुटे हुन dares जो कोहीले। यही कारणले ईयू समितिमा यो महत्वपूर्ण शोर यसको भन्न सक्दछ।
यसका लागि थपका लागि दुई लिङ्क गरिएका लेखहरू माथिको लेखमा ब्रेक्सिट सम्बन्धी लेखहरू हेर्नुहोस्।
8 मार्च 2019 मा 06: 21
उदाहरणको कथाले मलाई सम्झाउँछ:
एक मानिसलाई माछा दिनुहोस् र एक दिनको लागि उसले खान्छ। मानिसलाई माछा मार्न सिकाउनुहोस् र तिनको सम्पूर्ण जीवनको लागि खाना छ।
सरकारहरू के गर्दैछन् माछा मार्ने व्यवसाय बनाउँछ ताकि हामी अरूलाई निर्भर छौं। राजनैतिक नेताहरूमा मतदान गर्ने जुन तपाईंको नाममा पैसा खर्च गर्दछ र उनीहरूको माध्यमबाट थिच्नुहोस् त्यसै कुरा आउँछ।
याद गर्नुहोस् के चाँडै के हुनेछ, नि: शुल्क पैसा (आधारभूत आय) विश्वभरबाट रोकिनेछ। यसैले हामी त्यही फीडर / बाकसमा बस्छौं। नि: शुल्क माछा र विशेष रूप देखि एक तरिका को लागी मुक्त नहीं पाईएको छ, तर पुरा तरिकाले निर्भर। परिणामको रूपमा, लगभग सबैजना चिप प्रत्यारोपण गर्न मनाउन सजिलो हुनेछ, अन्यथा तपाईले तपाइँको आधारभूत वेतन प्राप्त गर्नुहुँदैन।
हामी के गर्न सक्छौं? पहिलो मत्स्य पालन गरौं, तपाईं शांत हुनेछौं र तपाईं फेरि केहि पैसा बचत गर्नुहुन्छ।
8 मार्च 2019 मा 10: 53
सज्जनहरूले राजदूतहरू शासकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र कहिल्यै अन्धा जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्! कसैले रोजगारी नगर्ने छनौट गर्नु पर्छ! यदि तिनीहरू उपेक्षा गरिन्छ भने तिनीहरू नियन्त्रण र पतन गुमाउँछन्! मद्दतका लागि उनीहरूको अधिकार भन्दा बढी एकअर्कालाई! एक आपराधिक प्रणालीमा काम नगर्नुहोस् र सबैलाई मनपराउने (बौद्धिक र स्वायत्त) मनोगोथलाई भगवान जस्तै!
10 मार्च 2019 मा 23: 29
म भेडाको बारेमा केही राम्ररी आएको छु। मलाई त्यो यहाँ साझेदारी गर्न थियो। मेरो सामाजिक सञ्जाल छैन अन्यथा मैले यसलाई यसलाई केकेजजेजसँग साझा गरेको छु।
तर यसलाई "चुनाव" अघि सबैलाई हेर्नु पर्दछ। यो एक भ्रम हो, घेरा छ।
शान्ति र प्रेम
« छोटो अवधिमा पहिले नै ब्रेन-कम्प्यूटर इन्टरफेसहरू: फेसबुक चाँडै हाम्रो विचारहरू पढ्न सक्नुहुन्छ? उत्तर: हाँ
BREAKING: नजिकको विश्व-स्तरीय परमाणु आपदाको ठूलो अलार्म! »
कुल भ्रमण: 14.616.728